Mareykanka Oo Dacwado Dhawr Ah Ka Gudbiyay Madaxda Shirkad Laga Leeyahay Dalka Shiinaha – somalilandtoday.com
Mareykanka Oo Dacwado Dhawr Ah Ka Gudbiyay Madaxda Shirkad Laga Leeyahay Dalka Shiinaha
(SLT-Washington)-Wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa dacwado dhawr ah waxa ay ka gudbisay madaxa dhaqaalaha shirkadda tiknoolajiyadda ee Huawei ee laga leeyahay dalka Shiinaha Meng Wanzhou.
Dacwadaha laga gudbiyay waxaa ka mid ah, wax idaba marin lagu sameeyay bangiga iyo fiilooyin, shariciga Mareykanka oo la baalmaray iyo xatooyo loo geeystay shirakadda technology-adda T Mobile ee laga leeyahay Mareykanka.
Ms Meng ayaa waxaa bishii aynu so dhaafnay lagu xiray dalka Canada kadib markii uu mareykanka ka codsaday in la xiro Meng, taasi oo xilligaasi lagu soo edeeyay in ay baalmaratay sharcigii cuna qabataynta lagu soo rogay Iran.
Haseyeeshee kiiskaasi ayaa waxa uu xumeeyay xiriirkii ka dhaxeeyay Shiinaha, Canada iyo Mareykanka.
Ms Meng iyo shirkadda Huawei ayaa waxa ay labaduba iska fogeeyeen eedeeymahaasi loo soo jeediyay.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dhammaan cuna qabataynadii Iran laga qaaday sanadkii 2015-kii dib ugu soo celiyay oo xitaa ugu sii daray cuna qabateynno kale oo dheeraad ah, taasi ayaana keentay in Mareykanka uu il gaar ah ku eego shirkad kasta oo ganaci la sameeyneyso Iran.
Bilihii ugu dambeeyay dhawr waddan ayaa soo gubiyay walaac dhanka aminiga ah oo ku aaddan shirkadda Huawei iyadoo Mareykankana uu shirakadaha iyo dalalka ku dhiira galinayay in aysan iibsan wax yaabaha ay soo saarto shirkadda Huawei.
Isniintii shalay ayay ahayd markii lagu dhawaaqayay in saraakiil sar-sare oo Shiinees ah ay toddobaadkan gudihiisa imanayaan magaalada Washington si ay Mareykanka ugala xaajoodaan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha.
Balse wasiirka ganacsiga ee dalka Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in aysan waxba iska galin dacwadaha loo heeysto shirkadda Huawei iyo dadaallada wadada hadallada ganacsiga ee shiinaha iyo Mareykanka.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa badeecadaha shiinaha ee loo dhoofiyo Mareykanka ku soo rogay canshuur ka badan $250 bilyan oo doolar, kadibna xukuumadda Beijing ayaa isna wacad ku maray in uu tallaabo taa la mid ah qaadi doono.